Mitohy anatin’ny 15 andro ny fihibohana: hohenjanina ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny Coronavirus | NewsMada
Mitohy anatin’ny 15 andro ny fihibohana: hohenjanina ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny Coronavirus
Hitohy 15 andro indray ny fahamehana ara-pahasalamana, araka ny fanapahana noraisin’ny filankevitry ny minisitra ny asabotsy teo. Manoloana izany, nambaran’ny filoha Rajoelina Andry, halina tamin’ny fanambarana ho an’ny vahoaka malagasy sy ny firenena, fa mitohy ny fepetra rehetra amin’ny faritra telo: Analamanga sy Atsinanana ary Matsiatra Ambony. Miampy ny any Alaotra Mangoro izany. « Hamafisina ny fanarahana ny fepetra rehetra amin’ny fifamezivezena sy ny fifampikasohana anatin’ny 15 andro. Ho hentitra amin’ireo manao antsirambina. Miditra amin’ny andro ririnina isika izao ka ho avo roa heny ny fampiharana ny fepetra hiarovana ny ain’ny Malagasy », hoy izy. Nialoha izany, notsiahiviny fa niakatra be ny antontanisa tato anatin’ny roa herinandro farany, noho ny tsy fitandremana… Naneho ny alahelony ny filoha fa nisy iray namoy ny ainy. « Efa taizan’aretina izy io ary niakatra ny tahan’ny diabeta sy ny hafanany noho ny Coronavirus… », hoy izy sady nampahery ny fianakavian’ny mana-manjo.
Gaboraraka sy tandrevaka amin’ny fanatanterahana ny fepetra
Nohitsiny hatrany fa tsy maintsy ho hentitra isika tsy isian’ny fifamezivezena mety hampiakatra ny tahan’ity aretina ity ka mila mifampitaiza sy mandray andraikitra ny rehetra ary tsy tokony hiseho ny tandrevaka. Nahatsikaritra ny filoha fa nisy ny gaboraraka tamin’ny fanatanterahana ny fepetra ka niteraka ny fiitaran’ny valanaretina. « Lasa foiben’ny Coronavirus i Toamasina, ahitana ny antontanisa avo indrindra… », hoy ihany ny filoha.
Nanteriny fa tsy ny Coronavirus ihany no fahavalo. Misy ny fahavalo any ivelany sy anatiny. « Eo ny fifampizarazarana sy ny fomba fiasa manao antsirambina… Vonona hiara-kiasa amin’ny rehetra na eto an toerana na any ivelany isika, saingy tsy baikoin’ny fikambanana na firenena hafa amin’ny safidy na lalana hampandrosoana an’i Madagasikara… Mitaky firaisankina anefa izany… », hoy ny filoha.
Natsinkafon’ny filoha Rajoelina Andry koa ny momba ny antontanisa navoakan’ny Institut Pasteur nampisavorovoro ny saim-bahoaka. Notsindriny fa 10 amin’ireo 67 ihany no mitondra ny tsimok’aretina rehefa naverina ny fitiliana. Nametra-panontaniana ny filoha: « Misy antsirambina ve sa sanatria fanahy iniana natao hampisavorovoro sa fahadisoan’olombelona? Na inona antony, tsy azo ekena ny tranga tahaka izany… », hoy izy.
Hotokanana mialoha ny 26 jona ny orinasa mpamokatra fanafody
Ankoatra izany, natsidiky ny filoha fa homarihina afaka iray volana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena ka tokony hijoroana. Anisan’izany ny hiatrehana ny hanarenana ny toekarena aorian’ny Coronavirus. « Porofoina amin’ny asa ny tena Fahaleovantena. Natao hakana lesona izao sedra izao », hoy izy.
Etsy andaniny, nohamafisin’ny filoha ny hanokafana laboratoara ho an’ny Malagasy sy hananganana orinasa malagasy hamokarana fanafody. « Hapetratsika sy hotokanana mialoha ny 26 jona izany. Hanova ny fiainan’ny firenena sy ny tantara izany… Mba ho maodely aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy aty Afrika ary maneran-tany i Madagasikara…. », hoy ihany ny filoha.
Mitohy ny fepetra fihibohana : Tsy mbola mianatra ny mpianatra, ankoatra ireo hiatrika fanadinam-panjakana. Mitsahatra amin’ny 1 ora ny asa rehetra: mpivarotra, tsena, asa tena… Mijanona amin’ny 3 ora ny asan’ireo mpitatitra. Mbola mitohy ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina. Mbola voarara ireo hetsika sy lanonana na fampisehoana famoriam-bahoaka.